माता लक्ष्मीका प्रिय हुन्छन् यी महिनामा जन्मिएका महिला, तपाईको कुन महिना ? – Khabar Silo
Posted on September 24, 2020 Author khabar silo Comment(0)
धेरै पटक मानिसहरुले तमाम कोसिस गर्दा पनि आफ्नो जीवनमा सफलता हासिल गर्न सक्दैनन। वास्तवमा यस्ता व्यक्तिहरुले कही न कही आफ्नो जीवनमा अन्जानमा यस्ता गल्तीहरु गरेका हुन्छन, जसको कारण उनीहरु पछुताउनु पर्ने हुन्छ। हिन्दु धर्म ग्रन्थमा दुई प्रकारका स्त्रीहरुले वरदान प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन अनुसार यदि कुनै व्यक्तिले उनीहरुलाई नराम्रो नजरले हेर्यो भन्यो […]
काठमाडौं । उनी जन्मिदा पुरुषको रुपमा जन्मिएका थिए । १७ वर्षको लक्का जवान हुँदा सम्म उनको शारिरीक विकास भइसकेको थियो । उनी पूर्ण रुपमा पुरुष भइसकेका थिए । यौ’नागंको विकास पनि भएको थियो । तर उनलाई आफ्नो यौ’नागं परिवर्तन गर्ने मन लाग्यो । उनी थाइल्याण्ड पुगे । अनि थाइल्याण्ड गएको एक लक्का जवान फर्कदा सुन्दरी […]
शनिवारको दिन शनिदेवको विशेष दिन हो । शनिदेवलाई न्यायका देवता मानिन्छ । शनिदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि यस दिन सर्सिउको तेल, कालो तिल आदी चढाइन्छ । ज्योतिषीय मान्यता अनुसार जसको कुण्डलीमा शनिदोष हुन्छ उनीहरुले शनिदेवको पूजा गर्न जरुरी छ । शनिवारको दिन केही काम गर्न वर्जित गरिएको छ – १ आपँको अचार खानबाट बच्नुहोस् । काँचो […]
अब फेरि लकडाउन ? यस्तो छ सरकारको तयारी हेर्नुहोस